BEST ANTIVIRUS MAKA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Best Antivirus maka Windows 10
Kedu ihe bụ antiviruses kasị mma na free antivirus maka Windows 10, nye nchebe dị nchebe ma gharakwa ịkụda kọmputa - a ga-atụle nke a na nyocha ahụ, ọzọ, site ugbu a, ọtụtụ nyocha antivirus agbakọtawo na Windows 10 site na ụlọ ọrụ antivirus onwe.
Na akụkụ mbụ nke isiokwu ahụ, anyị ga-atụle ụgwọ antivirus na-akwụ ụgwọ nke kachasị mma gosipụtara onwe ha na ule nke nchedo, arụmọrụ na njiri. Akụkụ nke abụọ bụ maka free antiviruses maka Windows 10, ebe, ọ dị mwute, ọ dịghị ihe nchoputa nke ọtụtụ ndị nnọchianya ahụ, ma ọ ga-ekwe omume ikwu na nyochaa nhọrọ ndị ga-aka mma.
Ihe dị mkpa: na ihe ọ bụla gbasara isiokwu ịhọrọ antivirus, ụdị okwu abụọ na-apụta mgbe niile na ebe nrụọrụ weebụ m - banyere eziokwu ahụ bụ na Kaspersky Anti-Virus anaghị abịa ebe a, na isiokwu: "Olee ebe Web Web?". M zara ozugbo: na set nke kacha mma antiviruses maka Windows 10 n'okpuru n'okpuru, m na-elekwasị anya nanị na ule nke a maara nke ọma antivirus laboratories, ndị isi bụ AV-TEST, Comparative AV na Ngwá Ọrụ Ngwá Agha. N'ime ule ndị a, Kaspersky na-adịbeghị anya abụrụ otu n'ime ndị ndú, Dr. Enweghi Intanet (ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya mere mkpebi dị otú ahụ).
Ihe kacha mma antiviruses dị ka nyocha onwe onye
N'akụkụ a, ana m ewere ihe nyocha ndị a kpọtụrụ aha na mmalite nke isiokwu ahụ, bụ nke e mere maka antiviruses na Windows 10. M jikwa ihe nchoputa kachasị ọhụrụ nke ndị nchọpụta ndị ọzọ tụnyere ya ma dabara na ọtụtụ ihe.
Ọ bụrụ na ị lelee okpokoro dị n'okpuru site na AV-Test, mgbe ahụ n'etiti ndị kasị mma antiviruses (akara kachasị maka nchọpụta na iwepụ nje, ọsọ ọsọ na ọrụ) anyị ga-ahụ ngwaahịa ndị a:
AhnLab V3 Internet Security0 (mbụ bịara na mbụ, Korea antivirus)
Kaspersky Internet Nche 18.0
Obere adịghị enweta isi n'ihe gbasara arụmọrụ, ma ndị na-esonụ antiviruses nwere oke n'ime ihe ndị ọzọ fọdụrụ:
McAfee Internet Nche 2018
Norton (Symantec) Nche 2018
Ya mere, site na ihe odide AV, anyị nwere ike ịkọwa antiviruses 6 kasị mma a kwụrụ ụgwọ maka Windows 10, nke ụfọdụ ndị na-amaghị onye ọrụ Russia, ma ha ejirilarị gosipụta onwe ha na ụwa (m ga-arịba ama na ndepụta nke antiviruses nwere akara dị elu agbanweela tụnyere afọ gara aga). Ọrụ ndị a nchịkọta nje virus yiri nke ahụ, ha niile, ma e wezụga maka Bitdefender na AhnLab V3 Internet Security 9.0, nke pụtara na ule, dị na Russian.
Ọ bụrụ na ị lelee ule nke ụlọ ọrụ nchebe ndị ọzọ na ịhọrọ ndị kasị mma antiviruses n'aka ha, ị ga-enweta foto na-esonụ.
AV-Atụmatụ (nsonaazụ dabere na ọnụ ọgụgụ nchọpụta nke egwu na ọnụ ọgụgụ nke ụgha)
Kaspersky Internet Nche
Tencent pc njikwa
Nchebe Ịntanetị Bitdefender
Nchekwa Ịntanetị Symantec (Norton Nche)
Na nyocha nke Virus Bulletin, ọ bụghị ihe niile antivirus ndị a na-egosi na ọtụtụ ndị ọzọ anaghị anọchite anya ule ndị gara aga, ma ọ bụrụ na ị mee ka ihe ndị edere n'elu ma, n'otu oge ahụ, merie VB100, n'etiti ha ga-abụ:
Tencent PC Manager (ma ọ bụghị na ule AV-Test)
Dị ka ị nwere ike ịhụ, maka ọtụtụ ngwaahịa, ihe dị iche iche na-emepụta nje virus na-apụ apụ, na n'etiti ha, ọ bụ nnọọ ihe ga-ekwe omume ịhọrọ antivirus kasị mma maka Windows 10. Iji malite, banyere ụgwọ a na-akwụ ụgwọ na m, dị ka ihe gbasara ya.
Onwe m, m na-amasịkarị Avira antiviruses (na ha nwekwara free antivirus, nke a ga-akpọ aha na ngalaba kwesịrị ekwesị) n'ihi na ya nkenke interface na ọsọ nke ọrụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, na nchedo ebe a, kwa, ihe niile dị n'usoro.
Avira Antivirus Pro, na mgbakwunye na nchedo nje, nwere njirimara nchebe Intanet, nchebe malware nwere ike ịdebe (Adware, Malware), ọrụ iji mepụta diski liveCD maka nje ọgwụgwọ, ụdị egwuregwu, na mgbakwunye ndị ọzọ dịka Avira System Speed ​​Up iji mee ngwa ngwa Windows 10 (n'ọnọdụ anyị, ọ dịkwa mma maka nsụgharị OS ndị ọzọ).
Ụlọ ọrụ ahụ bụ http://www.avira.com/ru/index (herewith: ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata mbipụta n'efu n'efu nke Avira Antivirus Pro 2016, mgbe ahụ, ọ bụghị na saịtị weebụ Russian, ị nwere ike ịzụta antivirus ọ bụrụ na ị gbanwee asụsụ na ala nke ibe mgbe ahụ, otu mbipụta ikpe dị).
Kaspersky Anti-Virus, otu n'ime ihe kachasị ekwu banyere antiviruses na nyocha kachasị emetụta ya. Otú ọ dị, ule - otu n'ime ngwaahịa kachasị mma antivirus, a na-ejikwa ya ọ bụghị nanị na Russia kamakwa na mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, ọ bụ ezigbo ewu ewu. Antivirus na-akwado Windows 10 kpamkpam.
Echere m dị ka otu ihe dị mkpa n'ịhọrọ Kaspersky Anti-Virus ọ bụghị nanị na ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na nyocha na afọ ole na ole gara aga na ọrụ dị mma maka arịrịọ onye ọrụ Russia (njikwa ndị nne na nna, nchebe mgbe ị na-eji akụ na ụlọ ahịa na ntanetị, ntụgharị uche), kamakwa ọrụ ọrụ nkwado. Dịka ọmụmaatụ, na otu edemede na nje virus ezoro ezo, otu n'ime ndị na-agụkarị agụ na-ekwu, sị: edere nkwado nke Kaspersky - e decrypted. Enweghị m n'aka na nkwado nke ndị ọzọ antiviruses ndị na-adịghị elekwasị anya n'ahịa anyị na-enyere aka na ndị dị otú ahụ ikpe.
Ịnwere ike ibudata mbipụta ikpe maka ụbọchị 30 ma ọ bụ zụta Kaspersky Anti-Virus (Kaspersky Internet Security) na weebụsaịtị website www.kaspersky.ru/ (site n'ụzọ, n'afọ a, Kaspersky Anti-Virus - Kaspersky Free) nwere n'efu.
Ezigbo antivirus na-ewu ewu, na Russian na site n'afọ ruo n'afọ, n'echiche nke m, ọ na-akawanye mma. Na-ekpe ikpe site na nchọpụta, ọ gaghị eme ka kọmputa ghara ibelata ma nye akwa nchebe na Windows 10.
Na mgbakwunye na ọrụ nke anti-virus na anti-malware, Norton Nche nwere:
Ewubere na firewall (firewall).
Atụmatụ na-emegide spam.
Nchedo data (ịkwụ ụgwọ na data nkeonwe ndị ọzọ).
Ọrụ nhazi ngwa ngwa (site na ịchọta disk ahụ, ihicha faịlụ ndị na-adịghị mkpa na ijikwa mmemme na akpaaka).
Download otu nnwale n'efu ma ọ bụ zụta Norton Nche na ebe nrụọrụ weebụ na website //ru.norton.com/
Na, n'ikpeazụ, Bitdefender antivirus abụrụla otu n'ime usoro mmalite (ma ọ bụ nke mbụ) nje virus maka ọtụtụ afọ na njirimara nke nchedo, nchedo egwu egwu Internet na mmemme obi ọjọọ ndị na-agbasa n'oge na-adịbeghị anya. kọmputa Ruo ogologo oge, eji m ụdị antivirus a (na-eji oge ikpe nke ụbọchị 180, nke ụlọ ọrụ na-enye mgbe ụfọdụ) ma eju ya afọ (n'oge m na-eji Windows Defender 10).
Kemgbe February 2018, Bitdefender Antivirus amalitelarị na Russian - bitdefender.ru/news/english_localizathion/
Nhọrọ ahụ bụ nke gị. Ma ọ bụrụ na ị na-atụle nchebe akwụ ụgwọ megide nje na egwu ndị ọzọ, m ga-atụ aro ịtụle setịpụrụ nke antiviruses, ma ọ bụrụ na ị họrọghị na ha, ṅaa ntị na ụdị antivirus gị họọrọ onwe ya na ule (nke, n'ọnọdụ ọ bụla, dịka ụlọ ọrụ ahụ si dị na-eduzi, dị ka ezigbo ezigbo ọnọdụ eji).
Free Antivirus maka Windows 10
Ọ bụrụ na ị na-ele ndepụta nke antiviruses nwalere maka Windows 10, mgbe ahụ n'etiti ha ị nwere ike ịhụ atọ free antiviruses:
Avast Free Antivirus (nwere ike ibudata na ru)
Panda Nche Free Antivirus //www.pandasecurity.com/russia/homeusers/solutions/free-antivirus/
Ha nile gosipụtara nsonaazụ nyocha na arụmọrụ dị mma, ọ bụ ezie na m nwere ajọ mbunobi megide Tencent PC Manager (n'akụkụ nke ya: ọ ga-ebukọrọ ihe dị ka nwa ejima ya 360 Total Nche otu ugboro).
Ndị na-emepụta ngwaahịa akwụ ụgwọ, nke e kwuru na ngalaba mbụ nke nyochaa, nwere onwe ha free antiviruses, isi ihe dị iche na nke a bụ na enweghị ọrụ nke ọrụ na modulu, ma na nchedo site na nje ndị ị nwere ike ịtụ anya na otu nnukwu arụmọrụ. N'etiti ha, m ga-alụke nhọrọ abụọ.
Ya mere, free antivirus si Kaspersky ụlọ nyocha - Kaspersky Free, nke nwere ike ibudata site na saịtị na saịtị Kaspersky.ru, Windows 10 na-akwado n'ụzọ zuru ezu.
Njikọ ahụ, ntọala niile dị ka ụdị antivirus ahụ, ma ọ bụghị na ọrụ nke ịkwụ ụgwọ ego, njikwa nna na ụfọdụ ndị ọzọ adịghị.
Na nso nso a, Bitdefender Free Edition enwere nkwado nkwado maka Windows 10, yabụ ugbu a, anyị nwere ike ikwu ya n'enweghị nsogbu. Ihe onye ọrụ ahụ nwere ike ọ gaghị amasị bụ enweghị njikọ nke asụsụ Russian; ma, ọ bụ ezie na enweghi ọtụtụ ntọala, nke a bụ ihe mgbakwunye dị mfe, dị mfe na ngwa ngwa maka kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.
Nchịkọta zuru ezu, ntụziaka maka nhazi, nhazi na ojiji dị n'ebe a: BitDefender Free Edition Free Antivirus maka Windows 10.
Dị ka ọ dị na mbụ - antivirus free n'efu nke Avira, nke chebere nchedo nje na malware na firewall wuru (ị nwere ike ibudata ya na avira.com).
Ana m ebido ịkwado ya, na-eburu nchedo nchebe dị irè, nnukwu ọsọ ọrụ, nakwa, ma eleghị anya, ọ dịkarịa ala enweghị nkwenye na nzaghachi onye ọrụ (n'etiti ndị na-eji antivirus free Avira chebe kọmputa).
Maka ozi ọzọ banyere free antivirus na iche iche nyochaa - kacha mma free antivirus.
N'ikpeazụ, ana m ekwusi na ị ga-eburu ọnụnọ nke ngwá ọrụ pụrụ iche iji wepu ihe omume ndị na-achọghị na nke obi ọjọọ - ha nwere ike "ịhụ" ihe dị mma antiviruses anaghị achọpụta (ebe ọ bụ na ihe ndị a anaghị achọ nje, ma ọ bụrụ na ị nyochaa).